ANTOKO MARINA : « Diso fanantenana amin’ny fitondrana ny vahoaka” | NewsMada
ANTOKO MARINA : « Diso fanantenana amin’ny fitondrana ny vahoaka”
Par Freenews sur 26/05/2017
Ranaivoson Jean Désiré, mpandrindra nasionalin’ny antoko Marina.
“Mangina ny mpanao politika sy ny vahoaka amin’ny ankapobeny. Ny fahanginany, tena mbola eo am-pikarohan-kevitra ve ahafahan’ny Firenena mivoaka amin’izao olana eto amin’ny Firenena izao? Antony, ny fahitan’ny vahoaka fa tsy tafavoaka hatrany ny Firenena fa karazany mitanty ny vokany hatrany izy ireo. Tsy manana toe-tsaina hioitra na hanohitra intsony ny vahoaka satria diso fanantenana amin’ny hafitsoky ny mpitondra tonga eo”. Io ny fanehoan-kevi-dRanaivoson Jean Désiré, mpandrindra nasionaly eo anivon’ny antoko Marina. Efa maro loatra ny sorona nataon’ny vahoaka malagasy ary matetika diso fanantenana nanomboka tamin’ny 1991, ny 2001 ary ny 2009. Mbola ilaina ve ny manao sorona amin’izao zava-misy izao? Anisan’ny mahatonga ny fahanginana amin’izao fotoana izao io, raha ny fanampim-panazavany. Na tena lany hevitra ny mpanao politika na mahatsapa fa mitanty ny vokany dia mangina. “Ho an’ny antoko Marina, tsy mitsaha-maneho hevitra izahay. Isan’ireny ny resaka vidim-bary. Mikoropaka ny fitondrana taorian’ny filazan’ny antoko Marina ireny ary mbola io miezaka mamaha io olana io hatramin’izao”, hoy izy. Nohamafisiny fa miezaka manitsy ny zava-tsy mety eto amin’ny firenena izy ireo.
Olana ny olona
Anisan’ny fototr’olana mahatonga ny firenena mikatso, amin’ny ankapobeny, ny fametrahan’ny vahoaka olona aloha vao ny fotokevitra. Nambaran-dRanaivoson Désiré hatrany fa “raha tsiahivina ny tantara, ny tamin’ny 1975 no niara-dalana ireo, ny olona sy ny boky mena ary ny lalàmpanorenana”. Fahadisoana, ohatra, ny tamin’ny 1991, satria olona no napetraka fa tsy nanana fandaharanasa ka rehefa nanontaniana momba izay, ny “forum national” no fandaharanasa. Amin’ny ankapobeny, olona tsy tena manana vina no tonga eo amin’ny fitantanana.
Nohazavainy fa ny mahatonga ny fanoherana tsy tafatambatra, tokony hametraka ny hevitra iombonana aloha satria miteraka sakana hatrany io eo amin’ny fitambarana. Inona no fandaharanasa, inona ny vina, manao ahoana ny fomba fiasa? Izay vao afaka mametraka rafitra mampita ny vina. Ny mampalahelo, arakaraka ny toe-java-misy no hametrahana ny fiarahana, izay matetika miteraka olana. Raha ny tokony ho izy, any amin’ny farany vao mametraka olona, toy ny ho filoham-pirenena sy ny azo atao Praiminisitra sy ny maro hafa. Olana hatrany ny olona eo amin’ny fitantanana?